Single Mode Fibre Optic Cable, mifono vy Fibre Cable Indoor Amin'ny LSZH / Steel Tube orinasa sy ny mpamatsy | TTI
Fibre Optic Patch Tady
Fibre Optic Splice Mikatona
Tsy izahay ihany no mivarotra ny vokatra. Fanatitra tsara izahay asa fanompoana sy ny fanohanana matihanina.
Mifidiana TTI, mba hahatonga ny Internet Expedite!
Kaody QR Company
Single Mode Fibre Optic Cable, mifono vy Fibre Cable Indoor Amin'ny LSZH / Steel Tube
Mangataka ny notsongaina
PVC / LSZH / OFNR / OFNP / PE
Orange, Mavo, Aqua, Purple, Violet Or namboarina
Single fomba mifono vy Indoor Fibre Optic Cable amin'ny LSZH / Steel Tube
Tsara milina sy environmentai toetra;
Malefaka, malefaka, mafy orina, mora ny splice, dia tena ampiharina amin'ny Optical lavitra, an-tsaha, fanorenana wiring, trunking connectors;
Lelafo retardant toetra sy ny mivory ny fepetra takiana amin'ny fitsipika manan-danja;
Hihaona fepetra isan-karazany tsena sy ny mpanjifa.
Ampiasaina amin'ny ankapobeny isan-karazany Optical
Ampiasao in pigtails sy ny Patch tady
Ampiasaina amin'ny connectors in Optical efitra sy ny fitaovana fifandraisana Optical fizarana zana-kazo
Ampiasaina ho fitaovana Optical connectors
Ny lafiny mifanaraka ny rehetra fibre optic tariby (table 1)
Cable karazana Cable Diameter MG Stainless vy Tube savaivony MG -Buffered mafy fibre savaivony MG
2.0GJSJV Φ2.0 ± 0.1 Φ0.9 ± 0,05 Φ0.5
3.0GJSJV Φ3.0 ± 0.1 Φ1.41 ± 0,05 Φ0.9
Ny lafiny mifanaraka ny rehetra fibre optic tariby (table 2 )
Cable karazana Cable Diameter (MG) Cable lanja KG / KM Tensile N Bend rayon (MG) * Hanorotoro N / 100mm
fotoana fohy Fotoana ela mavitrika voasakantsakan'ny
2.0GJSJV Φ2.0 ± 0.1 6.5 200 100 20 10 4500
3.0GJSJV Φ3.0 ± 0.1 10.5 200 100 30 15 4500
Rehetra ny soa toavina eo amin'ny latabatra 2, izay ho an'ny boky ihany
Mampiasa fibre ny G657 andian-dahatsoratra, nipoaka ny hiondrika dia ho latsaky ny 15mm
fibre optic tariby mifono vy,
fomba tokana fibre optic tariby
Mpanjifa misafidy vokatra fepetra arahana ary nandidy hanome vaovao. Araka ny fanazavana nomen'ny mpanjifa, dia manome anao ny tsara indrindra sy ny fonony famolavolana vahaolana. - Sample famolavolana sy famokarana, ny mpividy dia afaka mamerina imbetsaka sy manova, ataontsika mandra-afa-po ianao, mandra-pahatongan'ny farany fandraisana ho mpikambana;
-According ny fepetra manokana ny mpanjifa, dia afaka manome anao ny tsara indrindra sy ny fonosana vokatra famolavolana vahaolana, orinasa mpamokatra entana entana izay namboarina manokana ho anao.
- ny fandraisana ho mpikambana avy hatrany rehefa avy santionany, mandamina famokarana mahomby mba hahazoana antoka marim-potoana lahateny.
- Tonga soa eto amin'ny ny vokatra sy ny tolotra hametraka handroso soso-kevitra mahasoa, mpividy nataony nandroso ny fampiasana ny toe-javatra sy tamberina, dia hibitsika amintsika ny hanatsara ny zava-baovao tsy tapaka, ny fikatsahana ny lavorary tsara.
Select mpanjifa → manome vokatra karazana fepetra arahana ny vokatra manokana → → Manamarina vokatra vaovao mamaritra fonosana vokatra, fomba fitaterana → mamaritra amin'ny antsipiriany ny vokatra vaovao mba famantarana fifanarahana → → → fanaterana faobe famokarana.
Amin'ny ankapobeny, na izany 10-15 andro. Delivery dia azo atao ho an'ny mpanjifa (na an-toerana sy ny iraisam-pirenena).
Matoky isika fa afaka mamokatra vokatra amin'ny kalitao tsara sy ny vidiny ambany. Ny orinasa hanao ny zavatra rehetra araka-varotra fanompoana ho anao.
Vokatra rehetra dia notsapaina ny 100% amin'ny orinasa.
Mifanaraka tsara kalitao iraisam-pirenena nandinika fenitra, tanjona ary Siantifika kalitao maso sy ny fanombanana ny vokatra.
Amin'izao fotoana izao, efa lasa TTI ISO 9001, ISO 14001 fanamarinana.
Tsy manaraka ny "mitandrina, tena nitandrina, hihaino" fanompoana faneva, mba hanome mpanjifa amin'ny feno, avo-tsara fikarakarana momba ny fitsaboana.
96 Core Fibre Optic Cable Distribution Structur ...
Fehin'aina 12 Core Optical Fibre Cable 0.9mm Flame ...
Outdoor Underground Fibre Optic Wire 2 Core Ben ...
Mini fehy Fibre Optic Cable, 3.0mm 12 Core O ...
Address: East 6 / F, Building C, Yuanling Qiaotong Industrial Park, Shiyan, Bao'an District, Shenzhen, Sina
Copyright © 2016 - 2018 ttifiber.com. Zo rehetra voatokana.
Fanohanana ara-teknika: TTI Fibre